သိထားသင့်သည့် တိုင်းတပါး စကားလုံး ၆ မျိုး - Myanmar Network
သိထားသင့်သည့် တိုင်းတပါး စကားလုံး ၆ မျိုး
Posted by Language Republic on November 20, 2014 at 17:44 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ရေခြားမြေခြားမှ အသုံးအနှုန်းများသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် (အခြားဘာသာစကားများတွင်လည်း ဤသို့နှယ်) တစ်သားတည်းဖြစ် နေချေလေပြီ။ အသုံးများသည့်စကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့် သုံးနှုန်းပုံကိုသိထားခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပထမဦးစွာ ၄င်းစကားလုံးများပါသည့် အရေးအသားများကိုနားလည်စေနိုင်မည်။ ဒုတိယအနေနှင့် မိမိကိုယ်တိုင် မလွှဲမရှောင်သာသည့် အခြေအနေများတွင် ၄င်းစကားလုံးများကို သုံးကောင်းသုံးရနိုင်မည်။ (သို့ရာတွင် လူတတ်ကြီးလုပ်သည့် လေသံပေါက်စေရန်အတွက်တော့ မသုံးသင့်ပါ။) အောက်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် အသုံးများသည့် တိုင်းခြားစကားလုံး ၆ ခုကိုလေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
De facto သည် “actual (adj) ” သို့မဟုတ် “in practice (adv)” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် လက်တင်စကားဖြစ်သည်။ ဥပဒေစကားရပ်တွင် de facto သည် “တရားဝင် ဟုတ်သည် ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ လက်ရှိလက်တွေ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော၊ အုပ်ချုပ်နေသော။” ဟုအဓိပ္ပါယ်နှင့်သုံးသည်။ ၄င်းသည် de jure “by law တရားဝင်၊ ဥပဒေအရ” ၏ဆန့်ကျင်ဘက် အနေနှင့်သုံးသည်။
English is de facto the common language of much of the world today.
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည် ကမ္ဘာ့နေရာအတော်များများတွင် ဘုံဘာသာစကား အဖြစ်လက်တွေ့တွင် ရပ်တည်နေသည်။
The country has de facto independence now, and it will soon be recognized de jure by the world's governments.
ထိုနိုင်ငံသည် လက်တွေ့အားဖြင့် လွတ်လပ်ရေးတော့ရပါပြီ။ မကြာခင်တွင် ကမ္ဘာက တရားဝင်အသိ အမှတ်ပြုခံရပေမည်။
ဤစကားလုံးသည် “face to face (adverb)” မျက်နှာချင်းဆိုင် ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် ပြင်သစ်စကားလုံးမှလာသည်။ သို့ရာတွင် “compared with နှိုင်းယှဉ်လျက်” သို့မဟုတ် “in relation to ဆက်နွယ်လျက်၊ ပတ်သက်လျက်” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် ၀ိဘတ်အနေနှင့်ပိုအသုံးများပါသည်။
I've got to speak to James Lewis vis-a-vis the arrangements for Thursday.
ကြာသပတေးနေ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့James Lewis နဲ့ စကားပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ဗဟိုအစိုးရနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဒေသခံအာဏာပိုင်တို့အာဏာ ကျဆင်းလာခြင်းသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
ပိုနေမြဲကျားနေမြဲ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့် ထင်ရှားသည့်လက်တင်စကား Status quo သည် “the current or existing state of affairs” လက်ရှိရှိနေသည့်အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ တစ်ခုခုက “တည်ဆဲအခြေအနေ” ကိုပြောင်းလဲလျှင် changes the status quo ဟုပြောနိုင်သည်။
လူတစ်ချို့ကတော့ လက်ရှိအခြေအနေလေးကို တည်မြဲနေစေချင်ကြတယ်။
အဆိုပါအသုံးသည်မူလက အင်္ဂလန်ရှိ ပြင်သစ်စကားပြော မင်းမျိုးမင်းနွယ်တို့ထံမှ ဆင်းသက်လာသည်။ လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်အရ “bottom ofasack အိတ်ဖင်ပိတ်” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် “တစ်ဖက်ပိတ်လမ်း”ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ တင်စားပြီးသုံးသည့်အခါ ဘယ်မှမသွားနိုင်သည့်လုပ်ရပ်၊ ထွက်ပေါက်မရှိ ချောင်ပိတ်မိသည့် အခြေအနေ ဖြစ်လာသည်။
This particular brand of socialism had enteredacul-de-sac
(ဤကဲ့သို့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ပုံစံသည် တစ်ဖက်ပိတ်လမ်းထဲ ရောက်သွားခဲ့ချေသည်။ (ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်သွားသည်။)
Per se သည် “ပင်ကိုအားဖြင့်၊ သူ့ချည်းသက်သက် by itself, intrinsically” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည့်လက်တင် စကားဖြစ်သည်။
The drug is not harmful per se, but is dangerous when taken with alcohol.
ဆေးဝါးသည်သူ့ချည်းသက်သက်ဆိုလျှင်တော့ ဘေးမဖြစ်စေပါ။ သို့ရာတွင် အရက်နှင့်တွဲသောက်လျှင်တော့ အန္တရာယ်ရှိသည်။
Research shows that it is not divorce per se that harms children, but the continuing conflict between parents.
သုတေသနအရ ကလေးများအား ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်းသည် အိမ်ထောင်ပြိုကွဲခြင်းသက်သက်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ မိဘများအကြား မပြီးဆုံးနိုင်သည့် ပဋိပက္ခ များကြောင့်ဟုဆိုသည်။
လက်တင်ဘာသာမှ မွေးစားထားသော Ad hoc သည် နာမ၀ိသေသန adjective အနေနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကြိယာဝိသေသန adverb အနေနှင့်သော်လည်းကောင်း သုံးနိုင်သည်။ “သီးခြား၊ အထူးကိစ္စအတွက် ဖွဲ့စည်း ထားသော formed or created withaspecific purpose ” နှင့် “သီးခြားရည်ရွယ်ချက်/ အခြေအနေ အတွက် for the specific purpose or situation.” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ “ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသော၊ ကျပန်း သင့်ရာ” အနေနှင့်လည်းသုံးသည်။
an ad hoc committee/meeting
We deal with problems on an ad hoc basis (= as they happen).
ပြဿနာတွေကို ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းပဲ ကျပန်းဖြေရှင်းပါတယ်။
Dailywritingtips.com မှ Daniel Scocco ၏6Foreign Expressions You Should Know မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Functioning in English (Making Suggestions) by Daw Tin Nwai Win
ကောင်မလေးတို့စကားဝိုင်း (Conversation Lesson)
Permalink Reply by thinkhaingsoe on November 27, 2014 at 9:29
Permalink Reply by CHO TUN on December 6, 2014 at 11:06
Thanks for the post. Those are the usages I'd like to know/understand, very useful.
I would appreciate if you could post for the usage "I was wondering" with examples.
PS: How to save this article?
Permalink Reply by phyoyarzarkyaw on February 23, 2015 at 11:47